Manchester United oo isku diyaarineysa inay sameyso heshiiskii ugu weynaa taariikhda gudaha England – Gool FM
Tottemham iyo Arsenal oo ku dagaallamaya soo xero gelinta xiddig ka tirsan Man City
“Haddii aan markale dhalan lahaa, goolhaye ma aanan noqdeen” – Valdes
“Haddii horyaalka aanan ku guuleysan sababteeda labadiinna ayaa leh!” – Robin van Persie oo shaaca ka qaaday sidii uu 2013 u dhaqmay Sir Alex Ferguson
Lionel Messi oo ammaan ugu qubeeyay da’yar ka tirsan Kooxda Chelsea
Xiddigaha Kooxda Borussia Dortmund oo xilli hore tababarka ku soo laabtay, xilli Erling Haaland… + SAWIRRO
Willian oo qirtay inuu ku biirayo koox ka ciyaarta horyaalka Premier League marka uu xagaagan ka tago Chelsea!… (Halkee ku sii jeedaa?)
Alexis Sanchez oo dib ugu soo laabanaya Kooxdiisa Manchester United
“Kuwa neceb Liverpool waxay doonayaan in la joojiyo horyaalka” – Gary Lineker
Willian Borges oo sheegay sababta ay Liverpool iyo Man City ugu sarreeyaan Premier League
Manchester United oo isku diyaarineysa inay sameyso heshiiskii ugu weynaa taariikhda gudaha England
Dajiye May 21, 2019
(England) 21 Maajo 2019. Kooxda Manchester United ayaa isku diyaarineysa inay jabiso qiimaha ugu sareysa ee suuqa kala iibsiga ee gudaha dalka England.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” Manchester United ayaa diyaar u ah inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa João Félix, xiddiga Benfica ee reer Portugal, si ay ula soo saxiixato suuqa xagaaga ee soo socda.
Qiimaha lagu burburin karo qandaraaska uu 19 sano jirkan ku joogo kooxda Benfica ayaa gaarsiisan 105 milyan ginni.
Heshiiska ugu qaalisan taariikhda gudaha dalka England ayaa gaarsiisan 89 milyan oo ginni, oo ay kooxda Man United kala soo wareegtay dhigeeda Juventus laacibka khadka dhexe ee Paul Pogba seddex sano ka hor.
Tababaraha Ole Gunnar Solskjær ayaa doonaya inuu dib u xoojiyo safka Manchester United, kaddib xili ciyaareedkii niyadjabka ahaa ay kooxda soo qaadatay, wuxuuna doonayaa inuu u dhaqaaqo saxiixa João Félix.
Xiddiga da’ada yar ee kooxda Benfica ayaa ka mid ah ciyaartoyda xiligan ugu sareysa suuqa kala iibsiga ee xagaaga, maadaama ay adeegiisa wada xiiseenayaan kooxaha ugu waa weyn Yurub, sida Manchester City, Juventus, Bayern Munich iyo Barcelona.
Raphael Varane oo go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid, kahor xili ciyaareedka cusub
Maxaa ka jira in Juventus ay wadahadalo kula jirto xiddiga reer Serbia Sergej Milinkovic-Savic? Xog xiiso leh oo lasoo helay.